အားကစား - MMK188 Myanmar Online Game, Casino, Football, CockFight
Home › အားကစား
Myanmar Online Football SPORTBOOKS 88MMK
88MMK Myanmar ဟုလည်းလူသိများသော 88MMK ။ 88MMK သည်အခြားအွန်လိုင်းဘောလုံးလောင်းကစား ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းအွန်လိုင်းလောင်းကစားတံဆိပ်များ အနက်မှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ 88MMK ဖြင့်ကစားသမားများသည် Handicap၊ Over Under, 1X2, Myanmar Odds, Mix Parlay နှင့် ပိုမိုသောအရာများ အလောင်းအစားပြုလုပ်နိုင်သည်။
Odds 88MMK Myanmar သည် EPL, UEFA, Italy Series A, Bundesliga 1, La Liga နှင့် SEA Games အပါအ၀င် ကစားသမားများအတွက် တစ်လလျှင် Myanmar Odds ဘောလုံးပွဲများကို တစ်လလျှင် တစ်ရာကျော် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်သာ ရိုးရှင်း တည်ငြိမ်ပြီး Myanmar Odds အားကစား လောင်းကစားဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ရှာဖွေနေပါက Odds 88MMK သည် သင်ရွေးချယ်နိုင်သော အရာဖြစ်နိုင်သည်။
အားကစားလောင်းကစား ရှင်းလင်းချက် – အားကစားလောင်းခြင်းအမျိုးအစားများ
အားကစားအလောင်းအစားအမျိုးအစားများကို စူးစမ်းလိုပါသလား။ လိုအပ်သောအကြောင်းအရာများနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို အားကစားလောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာ 88MMK ၏လမ်းညွှန်ကိုကြည့်ပါ။ လူကြိုက်များသည့်ကစားနည်းများ၊ parlays များ၊ လက်တိုတိုကစားနည်းများ၊ ကျားကန်ခြင်းများနှင့် အားကစားဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများကိုသိရှိရန် လိုအပ်သည်များ စသည်တို့ကိုလေ့လာပါ။
Parlay – အလောင်းအစားဘာလဲ?
Parlay ဆိုသည်မှာလောင်းကြေးနှစ်ခု (သို့) နှစ်ခုထက်ပိုသောဆက်သွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကစားပွဲအတွက်အနိုင်ရရန် ကစားသမားသည် ကစားပွဲ၌လောင်းသူအားလုံးကို အနိုင်ရရှိရမည်။ အကယ်၍ ကစားသမားသည်ကစားပွဲတစ်ပွဲကိုရှုံးပါက ကစားပွဲတစ်ခုလုံးကိုရှုံးသည်။ အကယ်၍ ကစားသမားသည် ကစားပွဲတွင် လောင်းသူအားလုံးကိုအနိုင်ရပါက ကစားသမားသည် အလောင်းအစားများကို သီးခြားနေရာချထားခြင်းထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရလဒ်ကိုရရှိသည်။
Straight – အလောင်းအစားဆိုတာဘာလဲ?
Straight လောင်းခြင်းဆိုသည်မှာ လောင်းကစားတစ်ခု (သို့မဟုတ်) ပွဲတစ်ခုတွင်လောင်းကြေးတစ်ခု (သို့မဟုတ်) ပိုက်ဆံလိုင်းဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။
Futures – လောင်းကစားခြင်း
Futures လောင်းအစားသည် အနာဂတ်တွင်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော ဝေးလံသောအနာဂတ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုတွင်လောင်းကြေးလောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် လာမည့်နှစ်တွင်ကျင်းပမည့် ဘောလုံးပွဲချန်ပီယံ သို့မဟုတ်မည်သည့်အသင်းကိုအနိုင်ရလိမ့်မည့်အသင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။
Propositions – Prop လောင်းအစား
Proposition အလောင်းအစားများ (သို့) “Prop” အလောင်းအစားများသည် ပေးထားသောဂိမ်းတစ်ခုအတွင်းမှ ဖြစ်ရပ်များ၏ရလဒ်ကို အာရုံစိုက်စေသည်။ Props မကြာခဏကြီးမားသောအကျိုးစီးပွား၏ marquee ဂိမ်းများပေါ်တွင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ဤကား တနင်္ဂနွေနှင့် တနင်္လာနေ့ညများတွင် လာ‌သောဘောလုံးဂိမ်းများ, အဆင့်မြင့်ကောလိပ်ဘောလုံးဂိမ်းများ, အဓိကကောလိပ်ပန်းကန်ဂိမ်းများနှင့် PLAYOFF နှင့်ချန်ပီယံဂိမ်းများပါဝင်သည်။ ကျားကန်ကစားနည်းတစ်ခု၏ဥပမာမှာ“ မည်သည့်အသင်းသည် ပထမဦးဆုံးအမှတ်ရမည်နည်း?” ဖြစ်သည်။
Teaser – လောင်းကစားခြင်း
Teaser ‌လောင်းကစားခြင်းဆိုသည်မှာ ဘောလုံး သို့မဟုတ် ဘတ်စကက်ဘောကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဆိုပါအချက်များကို ဂိမ်းတစ်ခုထက်ပိုသောကစားသမား၏ ထပ်တိုးအချက်များဖြင့်ချိန်ညှိသည်။ ဘောလုံးတွင် ကစားသမားတစ်ဦးသည် တင်ထားသည့်အချက်များကို ၆၊ ၆.၅၊ ၇၊ ၁၀ သို့မဟုတ် ၁၄မှတ်ဖြင့်ရွှေ့နိုင်သည်။ ဘတ်စကတ်ဘောတွင် အားကစားပြိုင်ပွဲများကို ၄၊ ၄.၅ နှင့် ၅မှတ် အားကစားပြိုင်ပွဲများ ပြုလုပ်သည်။
Round Robin – လောင်းကစားခြင်း
တစ်ဦးက ပတ်လည် ရော်ဘင် parlays စီးရီးတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် အဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့ပါ၀င်သည့် ရော်ဘင်သည် ၂ အသင်းပါပြိုင်ပွဲ ၃ ခု (A + B, A + C နှင့် B + C) တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။